Indlela yokwahlula ividiyo kwiindawo ezininzi: iinkqubo ezahlukeneyo kunye nesifundo esifutshane | Abadali be-Intanethi
Yonke imihla umsebenzi wokuhlelwa kwevidiyo uyanda ngokufunwa zizitudiyo zoyilo ezininzi. Yiyo loo nto, kule posi, senze isikhokelo ukuba awukabi yingcali kwicandelo le-audiovisual, apho siza kukufundisa ngesifundo esifutshane sokwahlula ividiyo kwiindawo ezahlukeneyo.
Kungumsebenzi, ngoku, kwiiprojekthi ezininzi zokuhlela, bekusoloko kusetyenzwa kuwo kuba kusekwe ekubeni kubaluleke kakhulu kwiiprojekthi ezisuka kwiimuvi, iibhlog ze-intanethi, iindawo zentengiso, izifundo zevidiyo kwisihloko esithile, njl.
1 Ukuhlelwa kwevidiyo
2 Yahlula ividiyo ibe ngamacandelo amaninzi
2.1 Inyathelo 1: Faka inkqubo
2.2 Inyathelo 2: Khetha ividiyo
2.3 Inyathelo 3. Sika ikliphu yevidiyo kwaye ususe amacandelo
2.4 Inyathelo 4. Gcina iividiyo ezihleliweyo
3 Ezinye iinkqubo
3.2 I-Corel VideoStudio
3.3 DaVinci Qoxa
3.4 Isiqephu sokugqibela
Ukuhlelwa kwevidiyo kuchazwa njengo Inkqubo apho umhleli aqulunqa ividiyo kwiividiyo ezininzi, iifoto, izihloko kunye nezandi okanye umculo.
Ngexesha lokuhlelwa kwevidiyo, zonke izinto ezivakalayo nezibonwayo, imifanekiso, oopopayi, kunye nayo nayiphi na enye ifomathi yomfanekiso iyaqokelelwa, kwaye ixutywe nesandi ukuze ekugqibeleni kuveliswe ividiyo enye nawo wonke umxholo ubandakanyiwe.
Zininzi iinkqubo ezinceda kwinkqubo yokuhlela ividiyo enkosi kwinani kunye neziphumo ezahlukeneyo eziqulathe zona.
Yahlula ividiyo ibe ngamacandelo amaninzi
Kule nxalenye yeposi, siza kuchaza eyona ndlela ilula nekhawulezayo yokwahlulahlula ividiyo. Ukuqalisa, kubalulekile ukuba ufake isicelo seMovavi. I-Movavi ngumhleli wevidiyo osivumela ukuba sisebenzise ividiyo ngeendlela ezahlukeneyo ngenxa yezixhobo ezinikezelayo.
Inyathelo 1: Faka inkqubo
Ngaphambi kokuqala kubalulekile ukuba ukhuphele umhleli wevidiyo. Qalisa ifayile yokumisela kwaye ufake inkqubo ngokulandela imiyalelo eya kuvela kwisikrini xa sele uyifakile. I-Movavi Video Editor Plus ine-interface ecacileyo kunye nelula, kwimizuzu nje emihlanu uya kukwazi ukusebenzisa inkqubo. Ungasebenzisa le software ukwahlula kunye nokudibanisa iividiyo, okanye wenze eminye imisebenzi yokuhlela.
Inyathelo 2: Khetha ividiyo
Cofa ku Yongeza iifayile kwaye ukhethe ividiyo ofuna ukongeza izihlokwana kuyo. Ividiyo iya kuvela kwiMedia Bin. Emva koko tsala ikliphu kwaye uyiwise kwiTimeline.
Inyathelo 3. Sika ikliphu yevidiyo kwaye ususe amacandelo
Ukwahlulahlula ividiyo ibe ngamacandelo amabini, cofa kuqala kumgca wexesha kwaye uhambise uphawu olubomvu kwindawo kwividiyo apho ufuna ukuyisika khona. Unokufumana indawo ethile yevidiyo ngokuyidlala kwifestile yokujonga kwangaphambili. Emva koko nqakraza kwi icon yesikere kwaye ividiyo iya kwahlulwa ibe ngamacandelo amabini.
Ukusika iqhekeza levidiyo elingafunwayo, beka isiphawuli esibomvu ekuqaleni kwendawo engafunwayo kwaye nqakraza kwi icon yesikere. Emva koko hambisa isiphawuli esibomvu kwisiphelo secandelo elingafunwayo kwaye uhlukanise ikliphu kwakhona. Ngoku eli candelo liya kwahlulwa ngokupheleleyo kuyo yonke ividiyo kwaye konke okuseleyo kufuneka kwenziwe kukuyicima ngokucofa Cima.
Inyathelo 4. Gcina iividiyo ezihleliweyo
Cofa Thumela kwaye ukhethe ifomathi yevidiyo yakho kwiithebhu kwicala lasekhohlo lefestile ye pop-up. Unokukhetha nayiphi na ifomathi yevidiyo, njenge-AVI, MPG, 3GP, MKV, WMV, MP4, FLV okanye MOV, kwaye ugcine ifayile yakho njengevidiyo yeHD. Okulandelayo, bonisa ifolda yendawo kwi Gcina kwindawo kwaye ucofe uQalisa.
UClipchamp ngumpapashi, isiguquli sevidiyo kunye necompressor, yonke into enye, enekhamera yewebhu kunye nerekhoda yesikrini, umenzi wentengiso ye-Facebook kunye nezisombululo ezahlukeneyo zokulayisha, ukusuka kwiividiyo zeYouTube okanye itshaneli yeVimeo, ukuya kwiividiyo zokuthengisa ze-Instagram.
Ikuvumela ukuba uguqule ifomathi yeefayile kwisikhangeli kwaye uzigcine ngqo kwikhompyuter yakho. Ayibandakanyi nakuphi na ukukhuphela okanye ukufakwa kweefayile. Oku kukhusela ubumfihlo bakho kwaye kuqinisekisa ukuba iifayile zakho azize zabelwane namaqela esithathu ngaphandle kokuba ukhetha ukwenza njalo. Ukongeza, ugcina i-bandwidth kunye nexesha lokulayisha. Ungazithumela ngaphandle kwizisombululo ezahlukeneyo.
Umthombo: Miranda Group
UCorel ngumhleli wevidiyo onomdla kakhulu kwiingcali, equlethe inani elikhulu leempembelelo kunye nezixhobo zokutyebisa iimveliso zakho.
Phakathi kwemisebenzi yayo, sigxininisa ukusika kunye nokuhlela, iziphumo ezibonakalayo eziphambili, ukurekhodwa kwesikrini, iividiyo ezisebenzisanayo, iitemplates kunye nezixhobo ezikhawulezayo ezikuvumela ukuba wenze nantoni na ukusuka kwiimuvi ukuya kwiividiyo ezilula okanye oopopayi kunye nethuba lokudityaniswa nomhleli wemifanekiso ephambili ekhoyo kwiqonga elifanayo.
IDaVinci sisicelo sokuhlela ividiyo engekho emgceni, nangona ukusetyenziswa kwayo okuphambili kukulungiswa kombala. Ineemodyuli ezininzi, nganye inezixhobo ezikhethekileyo kunye neendawo zokusebenza kwinqanaba elithile: ukuhlelwa kwevidiyo, ukulungiswa kombala, ukuxuba imiphumo yesandi / yomsindo kunye nemiphumo ebonakalayo, imidiya kunye nokuhanjiswa kwayo yonke into oyifunayo ukungenisa, ukulungelelanisa nokuhambisa iiprojekthi.
Inonxibelelwano olulula kakhulu, olulungele abaqalayo, kodwa lukwaphelele ngokwaneleyo kwiingcali.
I-Final Cut ibe yenye yeenkqubo eziphambili malunga nokuhlela ividiyo yobuchwephesha. Le software Apple ivumela abasebenzisi ukuba babhale kwaye badlulisele iividiyo kwi-hard drive yangaphakathi okanye yangaphandle, apho inokuhlelwa, iqhutywe, kwaye ithunyelwe ngaphandle kwiifomathi ezininzi ezahlukeneyo.
Ujongano lwayo olulula luneefestile ezine apho unokukhangela, ujonge, ulungelelanise kwaye uhlele iziqeshana ezahlukeneyo kwaye uzitsalele kumgca wexesha. Ibandakanya iinguqu, ividiyo kunye nezihluzo zeaudio, kunye nezilungiso zemibala.
I-FlexClip sisixhobo esilula somhleli wevidiyo kwi-intanethi ekuvumela ukuba wenze naluphi na uhlobo lwevidiyo ngemizuzu eqala kwiitemplate esele zenziwe okanye ukusuka ekuqaleni: kuyo nayiphi na inethiwekhi yoluntu, iindaba, iinkampani, ukudibana kosapho, uhambo, phakathi kwezinye ezininzi. Inethala leencwadi leendaba elibanzi leefoto zesitokhwe, iividiyo ezingenanto yasebukhosini, kunye nomculo.
Phakathi kwemisebenzi ebandakanya ukunqampuna, iaudio kunye nevidiyo, i-voiceover kunye ne-watermark. Unokongeza izinto ezinopopayi ezinje ngesicatshulwa esiguquguqukayo, izinto ezingaphezulu, iiwijethi, iilogo, iimemes, iigifs, njl. Ixhasa irekhoda yesikrini kunye nesiguquli sevidiyo.
Yenye iapp yeApple yasimahla, ehambelana ne-iOS kunye ne-macOS, apho unokwenza ngokulula iividiyo ezineziphumo ezigqwesileyo. Isixhobo sikwakunceda wenze iitreyila zeemveliso zakho.
Inkqubo yokudala ilula kakhulu: khetha iividiyo kunye neefoto ofuna ukuzisebenzisa, yongeza izihloko, umculo kunye nemiphumo yesandi (kubandakanya ngaphezu kweengoma ze-80), yenza i-voiceovers, khetha kwiifilitha zevidiyo ezili-13 kwaye wabelane naye nabani na ofuna nakweliphi na iqonga. . Unokwenza indalo yakho kuso nasiphi na isixhobo se-Apple onayo kwaye uvule iprojekthi ngeFinal Cut ngokunjalo.
Ifoto ngu a ifoto kunye nokuhlelwa kwevidiyo kwi-app yeselula ilula kakhulu ukuyisebenzisa, isimahla kwaye iyahambelana ne-Android kunye ne-iOS.
Ngale app ungasika, uhlele kwaye uphinde uchukumise iifoto kunye neevidiyo, ngokukhawuleza nangokulula. Iimpawu zevidiyo zibandakanya: isicatshulwa, izihluzi, ukusikwa, ukwahlula, ukuphinda-phinda, ukujikelezisa, ukumisa inxalenye yekliphu, yongeza okanye uhlele imvelaphi, hlela isantya somsindo kunye nevolumu, cinezela kwaye uguqule iividiyo, udibanise iziqeshana ezininzi zibe nye, kwaye uthumele ngaphandle kokulahlekelwa ngumgangatho. ukuyabelana ngayo ku-Instagram, kuFacebook, kuWhatsApp, kuYouTube okanye kwiTikTok ngokucofa nje kube kanye.
Isimahla, kodwa ukuba sithumela ngaphandle ividiyo, i-watermark enelogo ye-InShot iya kwenziwa ngokuzenzekelayo. Ukuba ufuna ukuyinqanda ukuba ingabonakali, kufuneka uhlawule inguqu yayo epheleleyo, enika ukufikelela kwiimpawu eziphambili.
I-Kdenlive ayinguye omnye wabahleli bevidiyo abadumileyo, kodwa yenye yezona zilungileyo zasimahla kwaye ngenxa yoko sicinga ukuba kufanelekile ukukhankanywa. Yisoftware yokuhlela ividiyo enguMthombo oVulekileyo, oko kukuthi, umthombo ovulekileyo osekwe kwiNkqubo-sikhokelo ye-MLT, eyathi yakhawulelwa iLinux ngo-2003.
Ngoku iyahambelana neMac OS kunye neWindows kwaye ibonelela ngenkxaso yazo zonke iifomati. Iqulathe umgca wexesha elineengoma ezininzi zeaudio kunye nevidiyo, uyilo olunokwenzeka, kunye neziphumo zesandi ezisisiseko kunye notshintsho.
Ngalo mhleli ungaphatha ngokuthe ngqo nayiphi na iaudio okanye ifomathi yevidiyo, ngaphandle kwesidingo sokuguqula okanye ukubethelela kwakhona iiklip zakho okanye amaqhekeza. Ukongeza, ikuvumela ukuba usebenzise kwaye ulungelelanise uninzi lweetshaneli zevidiyo kunye neaudio, kwaye nganye kuzo inokuthintelwa okanye ithuliswe ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho.
Yenza ngokuzenzekela iikopi ezisezantsi zeklip zemithombo yokukuvumela ukuba uhlele kuyo nayiphi na ikhompyuter, kwaye kamva ukuthumela ngaphandle kwisisombululo esiphezulu.
Kukho iinkqubo ezininzi zokuhlela ezidalwe ngenjongo yokwenza umsebenzi ube lula kakhulu. Yiyo loo nto sinethemba lokuba sikuncedile kolu phendlo lweenkqubo kunye nesikhokelo esincinci esikunike sona.
Siyakumema ukuba uzame ukukhuphela ezinye zeenkqubo kwaye uqalise i-adventure njengomhleli wevidiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Indlela yokwahlula ividiyo ibe ngamacandelo amaninzi
indlela yokwenza iphephancwadi